I-Expatikazi Dubai - Iseluleko Sabathengi Bomhlaba Wonke
I-Expatikazi Dubai - Thola umsebenzi eMiddle East
Umhlahlandlela Wokuba Umshayeli We-Uber e-Dubai & Taxi Driver
Iseluleko se-Dubai Women Expat
U-Expatikazi Dubai siqasha e-UAE. Ngabe ungowesifazane? Ufuna ukuthola umsebenzi eDubai njengowesifazane e-Emirates?. Sinikeza umhlahlandlela ojulile wabesifazane abadingisiwe. Sihlinzeka ngosizo lwabesifazane abafuna umsebenzi kwi-UAE. Ukukhombisa sizokwenza ikuqondise ukuthi ungathola kanjani amathuba okuthola umsebenzi. Ngaphansi kwalezo zimo, faka izicelo zemisebenzi bese uthola izingxoxo eDubai njenge expat owesifazane eDubai.
Ngokuhamba kwesikhathi, Uma ungowesifazane ehlala e Dubai. Futhi ngasikhathi sinye ngifuna umsebenzi. Singa lapha ukukusiza uqale umsebenzi e-UAE. Njengoba kuye kwaphawulwa abesifazane be-expat bangochwepheshe abanolwazi. Kwabafuna kakhulu umsebenzi abafuna ukuthola umsebenzi. Ngokuvamile, hhayi owesilisa kuphela ibheke ukufudukela e-United Arab Emirates.
Abahlala emazweni aseGulf manje sebebekwe inkampani yethu. Ungafaka futhi i-CV yakho noma imininingwane eminye yokuqasha UDubai Job and Recruitment. Kulokho kuxhuma ama-ejenti okuqasha athumela imisebenzi yasendaweni enikezwa abafuna umsebenzi. Kwindatshana ye-Dubai, ungathola imisebenzi eminingi. Uma uyi-Expatikazi Dubai, bheka futhi ufunde umhlahlandlela wethu.
I-Expat Woman e-Dubai thola kabanzi mayelana nomsebenzi
Hlola imisebenzi yase-Dubai Dubai. Sikwazile ukubeka umhlahlandlela ukukusiza. Kuze kube sesikhathini samanje, usengawuthola umsebenzi futhi ofanelwe nezidingo zakho zokuthuthukisa umsebenzi. Ngaphambili, IDubai ne-Abu Dhabi yidolobha elihle kakhulu e-UAE. Maphakathi nendawo yokuqashwa komnotho kwe-UAE. IDubai ne-Abu Dhabi ziningi amathuba okuqashwa amaNdiya ahambela amazwe.
Okwamanje, inqubo yokuqashwa yehlukile eYurophu. Wonke amazwe angazelele kodwa asentshonalanga awaqondi konke. Wonke umqashi kuzokwenza ukufuna kwakho umsebenzi kube lula kakhulu. Inkampani yethu okwamanje ukusiza bonke abafuna umsebenzi e-Dubai. Silapha ukukusiza ukuba ube isisebenzi se-Expatwoman Dubai e-UAE.
Ngenhloso yokusesha umsebenzi. Ithimba lase-Dubai lenkampani yokuqasha iqembu lisho njalo. Okubaluleke kunazo zonke Ukuqasha Dubai ukukhumbula. Uma ufuna amathuba emisebenzi e-Dubai. Qinisekisa ukuthi uthengisa isipiliyoni sakho kumqashi. Ngokuvamile uma ufinyelela ku-interview. Kumele uzenze ube ngumfundi obalulekile emakethe eMiddle East. Ngokwengxenye enkulu, kufanele ube ngumele ukhetho olubalulekile. Futhi kwalokho okuwusizo enkampanini entsha.
Imisebenzi ye-Expatwoman Qatar
Hhayi kuphela i-Dubai ne-Abu Dhabi. Owesifazane othumayo angathola futhi umsebenzi eKatar. Ukuthola umsebenzi ku-Qatar akulula. Ngakho-ke okuyinhloko izindlela zokuthola umsebenzi e-Dubai. Kufanele kube ngcono kakhulu kunokuba ucabanga. Ngokuhamba kwesikhathi, inhlanhla yakho nsuku zonke kuya. Ngohlobo lomsebenzi owufanele umsebenzi we-cryptocurrency ukukwenza eQatar.
Izinkampani zaseQatar zifuna abasebenzi besifazane. Ngaphansi kwalezo zimo, izinkampani eziningi zifuna ukuthola abesifazane. Ezinye izingxenye zemisebenzi zingenziwa kangcono ngabesifazane. Isibonelo izitolo zegolide ngaphakathi kwesitolo sedolobha. Cishe zonke izinsuku zifuna abamele abathengisi besifazane. Lo msebenzi uthandwa kakhulu eQatar owesifazane ongaphandle. Ngakolunye uhlangothi, unayo ukubuka kumawebhusayithi omqashi.
Lona ngowokuqala into okufanele uyifune lapho ufuna umsebenzi njengoba izikhundla ezitholakalayo zibaliwe lapha kanye nezidingo nezinqubo zokusebenzisa. Iwebhusayithi ye-Company e-Qatar ingakusiza. Lokhu kucoca usesho lwakho futhi inciphisa ubungozi bemikhonyovu yomsebenzi. Ungathola konke ulwazi mayelana nomsebenzi nokuxhumana izinkampani ngokuqondile kumakhasi ohulumeni.
Yiba ngowesifazane okhulelwe futhi ufune imisebenzi yeDoha
Imisebenzi eDoha ingenye yezimpahla ezingcono kakhulu zezimpahla zowesifazane. Ngokuvamile, ungathola okunikezwayo kanye nomsebenzi eDoha City. Ngaphezu kwakho konke Isifunda seGulf sivulekele owesifazane omusha we-expat. Eminyakeni edlule Dubai City Company. Nakanjani, ngisize abesifazane ochwepheshe. Isifiso sethu ukukubeka imisebenzi emihle evela eMumbai eDoha, Qatar eMpumalanga Ephakathi.
Ngenhloso yokusesha umsebenzi e Doha. Bheka isimo ama-ejenti amakhulu kunawo wonke asebenzayo eQatar. IDoha iyidolobha eliphambili eQatar. Futhi indawo kuphela lapho ungasesha khona umsebenzi njengowesifazane. E-Doha City, ungakwazi xhumana namakhulu abaqashi. Ngakolunye uhlangothi, inkampani yethu ingakusiza.
Ngale nhloso, I-Dubai City Company inikezela abantu abazongenela ukhetho ngokuphelele. Sisiza ukuhambisa abesifazane eDoha City. Silapha ukukusiza ukuba ubekwe eQatar. Kodwa futhi uthole ezinye izithuba eMpumalanga Ephakathi njengengaphandle. Ngenkampani yethu, ungenza lokho futhi ube yisizwe sase-Expatwoman sase-Dubai.
Sebenzisa insiza yethu yokuqashwa online. Ubekwe eQatar edolobheni laseDoha. Inkampani yethu yokuqasha inikeza amathuba emisebenzi. Sihlala sizama ukusiza abesifazane abafuna umsebenzi. Ngalesi sizathu, siyikho ezama ukuthola imisebenzi ensimini ngqo ne-MBA. Ngoba eQatar kubaluleke kakhulu ukuba nemfundo enhle.
Imisebenzi ye-Expatwoman Dubai ne-Bahrain
Ngakolunye uhlangothi, uma ufuna umsebenzi. Cabanga ngeBahrain ekusesheni kwakho. Kunjalo ngaphezu kokufuna imisebenzi ye-Emirates. Wonke umuntu wesifazane angathola umsebenzi eBahrain. Sekela kulokho, i abesifazane besifazane bangathola umsebenzi e-Bahrain.
Ungabheka kumasayithi emisebenzi asendaweni. Ngaphezu kwalokho, thumela uhlelo lwakho lokusebenza ku-Bayt noma Monster. Futhi, ubheke imisebenzi e-Embassy e-Bahrain. Yize lokhu kungaba iqiniso ukusesha imisebenzi e-UAE nase-Emirates. Mhlawumbe akwanele ngakho-ke cabanga ngeBahrain. Ukuthola umsebenzi ofanele e-Bahrain esizeni somsebenzi se-Aljazeera noma amanye amasayithi emisebenzi.
Kukhona izindawo eziningana lapho amazwe angathola khona imisebenzi e-UAE. Indlela yokuthola umsebenzi e-Dubai udinga impendulo efanele yomhlahlandlela. Ngoba lapho izivakashi zifuna umsebenzi e-UAE. Kudingeka babe nolwazi oluningiliziwe. Ngokwesibonelo Iseluleko se-Dubai somsebenzi kanye nezindlela zokumaketha.
Imisebenzi ye-Expatwoman Dubai ne-Networking
Sebenzisa iNethiwekhi Yomama. Sonke siyazi mayelana nabesifazane. Bonke bathatha okuningi. Noma kunini lapho uhlangana nomunye owesifazane emuntwini. Udinga ukuqala ukuxhumana. Kungakhathaliseki ukuthi wenzani. Qala ukudala inethiwekhi yezidingo. Bheka ukuthi ubani owaziyo. Futhi hlola ukuthi ubani ongakwazi kukusiza ukuthi uqashwe.
Qiniseka ukuthi khuluma nezinye expats kowesifazane. Zama ukuhlala ubheka ngaphandle kwebhokisi. Ngakolunye uhlangothi, hlola umbuthano wakho webhizinisi. Umngani wakho osondele kakhulu angaletha amanani. Nini ngifuna indawo entsha eGulf. Ngakolunye uhlangothi, umuntu osuvele umazi. Ngokuqinisekile kungaba usizo olumangalisayo lapho ufuna umsebenzi.
Umuntu omuhle kakhulu owaziyo empilweni yakho yobungcweti. Kungaba wusizo ekusesheni komsebenzi. Futhi, zama ukuthola umuntu osebenza e-UAE. Ezinye izinkampani ziqasha kuphela emazweni aphesheya. Ngakho ukuxhumana nge-LinkedIn nakanjani uzokusiza ukuthola umsebenzi.
Ungayithola kanjani umsebenzi ku-UAE njengo-Expat Woman?
I-Expatwoman Dubai ibamba umsebenzi e-Dubai
Into enzima kunazo zonke ukufinyelela abaqashi. Kufanele ube nesithakazelo ku Imisebenzi yaseNingizimu Afrika eN Dubai. Ngoba abanye abaphathi beNingizimu Afrika yokuqashwa baqasha emazweni aphesheya. Ngubani ongakutholela inombolo yocingo efanelekayo abaphathi bokuqashwa?. Noma ikheli le-imeyili lomuntu ongakuqasha. Futhi okuhle kakhulu. Ukuthola umuntu ophethe ukuqasha kabusha. Futhi uma ukwazi dlulisela i-CV yakho kumuntu ofanele. Futhi faka igama elihle egameni lakho.
I-Expatwoman Dubai manje ingathola umsebenzi eMpumalanga Ephakathi. Inkampani yethu ukusiza expats ukuthola imisebenzi nenkampani yethu. Uma ufuna umsebenzi Emirates ungakwazi kalula yeka i-CV yakho emaqenjini ezinkampani zethu eDubai Airpot. Ngaphezu kwalokho, ungaxhumana nabanye abafuna umsebenzi futhi bangakusiza. Khumbula ukuthi ngisho nezeluleko ezilula zingashintsha indlela yakho yokucabanga.
I-Dubai City Inkampani manje seyenzile amathiphu wokuthutha for owesifazane expat. Ngalesi siqondisi esiphelele sabafiki abasha, kufanele uthole umbono ocacile wokuthi ungabekwa kanjani eDubai. Inkampani yethu futhi isiza ukufeza lezo zinhloso. Umsebenzi imakethe ye-Expatikazi Dubai iyakhula.
Ubuthi obubiza abaqashi e-Dubai
Kubalulekile ukuqaphela ukuthola igama lomqashi. Zama ukuthola eminye imininingwane ngale nkampani. Ngaphezu kwalokho, zama ukuthola izinombolo zocingo ezifanele. Lapho ufonela abaqashi. Zama ukusho lutho ngesipiliyoni sakho esibi. Ngaphezu kwalokho, sukuma nesipiliyoni sakho uma ufowuna abaqashi e-Dubai. Uma ubiza izinkampani.
Inhloso yakho ukukhuluma nayo umphathi oqashiwe wokusebenzela ngaphandle. Behluke kwabanye abafuna umsebenzi. Yiba nobungane akuyona indlela eya empumelelweni. Kumelwe ube ochwepheshe kakhulu. Futhi ubukhali njengomphathi webhizinisi.
Zama ukuxhumana nomphathi we-HR ngaphakathi enkampanini. Futhi ngasikhathi sinye ungavumeli umuntu akhombe wena. Unalokhu engqondweni, ebiza umphathi wokuqasha. Ungalokothi ube umsebenzi olula ukuwenza. Kepha ngakolunye uhlangothi, kuyaphumelela lapho ukhuluma futhi uthumela i-CV. Ikakhulu kumuntu ukuthi wena angathanda ukuthonya. Uzokhunjulwa uma ama-CV akho emazweni ebhokisi lokungenayo.
Kukhuluma ubuso nobuso nomphathi wokuqasha. Izokunikeza ithuba elihle. Ngokuvamile ukukhuluma ukwenza iphimbo lokuthengisa. Futhi phakamisa umbono omuhle kubaphathi abaqashisayo. I-Expatwoman Dubai enethuba elihle lokuqashwa.
Ama-Recruitment Agencies e-United Arab Emirates
Ehlangothini elihle Izinkampani zase Dubai. Futhi ukuqasha izinhlangano zokuqasha. Ngokuvamile, ukuqasha abesifazane. Izinhlangano zokuqasha e-UAE. Iyasesha umsebenzi wezwe ngamazwe ngomakhalekhukhwini. Ukuthola abazongenela ukhetho Futhi I-7th Emirates iyindawo enhle kunazo zonke ngoba lokho.
Ukufunwa kowesifazane wesayensi yokuthola iDubai emangalisayo. Ezinye zezikhundla zidinga ukuthintwa kwabesifazane kuphela. Isikhonzi noma ukuphathwa kwamahhotela. Bonke bayasesha for top Expat wesifazane Dubai. Futhi silapha ukuzokusiza.
Isibonelo empumalanga ephakathi. Owesifazane uvame ukuba ngabaphathi. Ungafunga ukuthi ukhokhelwe kakhulu imisebenzi yabesifazane. Imisebenzi enikezwa ukuphathwa kwabakhulu. Nezikhundla eziphezulu. Manje sekuthandwa kakhulu e-United Arab Emirates.
I-ejensi ye-Emirate iyasesha kakhulu abafuna ukhetho. Enye yezibonelo yi-Expo 2020 eDubai. Imakethe idale uhlu lwabazongenela ukhetho. Ikakhulu izinkampani eziqasha kuze kube yi-2020. Noma I-Google e Dubai iqasha.
Qaphela izikhala zomsebenzi ezikhokhwe kancane eDubai. Ngokuvamile ukukhuluma iDubai City. Ukuba nobugebengu obuhlobene ngokweqile super. Akusho ukuthi ungagxekwa. Uhlale ungumphathi okhokhelwa kahle. Eminye yemisebenzi ikhokhelwa kancane. Isibonelo nje izisebenzi ezintsha. Awukwazi ukulindela imali ephezulu ngokwesibonelo for jobs in Saudi Arabia. Kufanele ukhumbule ukuthi abanye babaqashi. Yenza ngokunenzuzo kubantu. Akukho emthethweni kwinhlangano yokuqasha ukucela ukuthi ukhokhe imali ukuthola umsebenzi ku-UAE.
Izisebenzi zokuqasha zabesifazane abangaphandle
Abaqashi kanye nabaphathi bokuqasha. Iyakwazi ukukhuthaza umuntu ngamunye. Umsebenzi wabo ukubeka wena. Kwabaphathi bokuqashwa, akukho mehluko. Uma ungowesifazane noma i-expat yowesifazane. Abaphathi bokuqasha benza imali ku- ukhetho oluphumelele. Ukuphathwa kokuqashwa kuqashwa yizinkampani ezihamba phambili. Ngakolunye uhlangothi, awusoze waqashwa ngabantu. Kuphela ngabaphathi bezinkampani ngaphakathi kwenkampani. Futhi, thola indawo yokusebenzela ukuqasha nezinsizakalo. Futhi xhuma nabaphathi bokuqasha eDubai.
Imisebenzi esemqoka kwabaqaphi abanolwazi. Ngokuvamile ukukhuluma ukuthengisa enkampanini. Hhayi ukuthengisa inkampani kuwe. Ngakho-ke qiniseka ukuthi uyazi ukuthi yini ongayenza ngokuya ngokuthengisa komuntu siqu. Kuningi izindlela zokuthola ukuqasha abaphathi e-Dubai. Yiqiniso, abaqashi banesithakazelo kuphela kulabafundi abaqeqeshiwe kakhulu.
Ngakho-ke isinqumo esibi kakhulu ongasenza. Ukungena ogibeni lokukhokha ikhomishini ukuze uthole umsebenzi. Ngokwesibonelo, inkampani yethu ingakusiza ekutholeni umsebenzi. Kepha asikwazi ukukunikeza ithuba lomsebenzi. Sisiza kuphela ngesikhathi senqubo yokuqashwa kabusha. Indlela enhle ukuthola inhlangano esemthethweni yokuqasha amathuba emisebenzi. Yize lokhu kungaba iqiniso. Empeleni, lapho ama-expats eseyiqedile inqubo yesicelo somsebenzi. Kufanele ubizelwe inhlolokhono. Ngemva kwakho konke akuwona wonke umuntu ofuna umsebenzi ozothola umsebenzi eDubai. Abanye babaxoshwa babuyela ekhaya.
Isibonelo abanye abafuna umsebenzi wesifazane. Ukuhlala phesheya kanye nokukhomba. Ezinye zazo Abokufika baseNdiya abesifazane nabo bathola umsebenzi yi-Dubai City Company. Ngaphansi kwalezo zimo, Uma ufuna ukuba yi-Expatikazi eDubai. Kepha njengamanje, uhlala phesheya kwezilwandle. Ungakwazi sebenzisa inkampani yethu ngenqubo yokufuna umsebenzi.
Ukulungiselela ukuxoxa e-Dubai
Ngokuqinisekile, izinkampani zaseDubai zingenye yezindlela ezihamba phambili. Ukuthola umphathi we-HR ukuze ubuyekeze uhlelo lwakho lomsebenzi. Ngamazwi ambalwa kuthatha isikhathi esiningi. Ikakhulu e-UAE. Mhlawumbe okungaphezulu kwezinyanga ze-6. Ukuze ube nesipiliyoni esanele sokuxoxisana nezimboni eziningi. Udinga ukuba nayo isipiliyoni esanele somsebenzi wehhotela. Ngakolunye uhlangothi, kudingeka ulandele inqubomgomo yokuqasha ngokusemandleni akho.
Zama ukwenza umbono omuhle ku-CV yakho. Ngesikhathi esifanayo, udinga ukuza uxoxisane naye. Kwenza njalo umbono wakho wokuqala ungcono kakhulu. Ikakhulukazi ukuze uthole umsebenzi wasebhange e-Dubai Enye yezinto okudingeka uzikhumbule. Lapho inkampani ekugcineni ukumema engxoxweni. Ngokuqinisekile, udinga ukuletha ikhophi ebuyekeziwe ye-Resume yakho. Njengoba unikezwe la maphuzu, umbono ohlakaniphile. Ukuletha izincwadi zokuncoma ezivela kubaqashi bakho bangaphambili.
Ngezinye izikhathi udinga ukubuka imininingwane yakho yomsebenzi. Njalo hlola i-CV yakho yemisebenzi yokumaketha. Futhi qinisekisa ukuthi wonke amadokhumenti owakhona kubaqashi. Yiba omunye wezinto ezihamba kahle nezethuliwe ezithunyelwe ngaphandle kwamaphutha okugama. Qiniseka ukuthi unayo yonke imibhalo ku-suitcase efanele noma ifolda emnyama emnandi. Ngoba ukuhamba futhi ukuthwala imibhalo ngokubukeka kabi. Ukwenza ubonakale ungcolile futhi ungakulungele ukuxoxa.
Ikhodi yokugqoka kanye nengxoxo yowesifazane e Dubai
Kuhambisana neminyaka yokuhlangenwe nakho. Udinga ukwazi ukuthi uyaphi ukugqoka ukuxoxwa ngokuhamba ngaphakathi. Ngasohlangothini oluhle zama ukunciphisa izinga lokuxineka ekuseni kwinhlolokhono. Udinga ukwazi. Ukuthi i-Dubai yidolobha lesiko lama-Arabhu elondolozayo. Uhulumeni wase-UAE babe nemikhawulo eqinile mayelana nendlela abesifazane okufanele bagqoke ngayo.
The Abafuna umsebenzi wase Pakistani e-UAE uyakwazi ukwenza izinto ezweni lamaSulumane. Owesifazane eDubai unamakhodi wokugqoka anqunyelwe ngokuphelele. Ngakolunye uhlangothi, abesifazane baseYurophu nabaseMelika banjalo bamukelekile ukusebenzisa imvunulo yabo yesiko. Kepha selokhu uba yisakhamuzi sase-Expatikazi Dubai. Uyokwazi ukwazi kwesiko lama-Arabhu.
Isibonelo e-Dubai, akulungile ukugqoka okubonisa ukugqoka. Owesifazane angabukeka emuhle cishe kunoma yiluphi uhlobo lwezingubo zebhizinisi. Futhi lokhu kufaneleke kakhulu e-Emirates. Ungabheka indlela yokugqoka e-Dubai?.
Umsebenzi omkhulu kunawo wonke futhi olula kakhulu e-Dubai
Kukhona nemisebenzi eyinkimbinkimbi kunazo zonke zokuzinikela kwabesifazane. Ngokwesibonelo umsebenzi wezimoto kwabesifazane e-Dubai. Kunamandla kakhulu ukuthola. Cabanga nje ukuthi uzothenga iPorsche entsha. Abantu abaningi bacabanga ukuthi umdayisi uzofika futhi akumeme. Kodwa-ke, uma owesifazane enza lokho ku-UAE. A mhlawumbe ukucindezela into engajwayelekile, ngenxa yamasiko.
Ngakolunye uhlangothi umsebenzi olula kowesifazane. Ngokuvamile kuwukuthi ukuqala umsebenzi njengomfundisi. Izithuba zemisebenzi yothisha zivulelwe abesifazane besifazane. Kubonakala njalo nsuku zonke njengoba owesifazane waseNdiya efundisa ezikoleni. Futhi izingane eziningi ziyabathanda. Abaningi bezakhamuzi bayazi lokho Dubai iyindawo engcono kakhulu yabasebenzi. Ngakho kukhona imisebenzi emihle nemisebenzi emibi ye-Expatwoman e-UAE.
Expatwoman Dubai - Siqasha
Manje sisiza abesifazane ukuba bathole umsebenzi e-Dubai
Vele ulayishe kabusha futhi uqale new Umsebenzi ku-UAE njenge-Expatwoman. Nathi futhi ukuqasha abafuduki basePhilippines e-Dubai.
Layisha kabusha Emadolobheni Akhula Ngokushesha Kakhulu Emhlabeni! - Expatwoman Dubai qala namuhla !.